Tababaraha Bayern Oo Ka Hadlay Xaaladda Xiddigiisa Lala Xiriirinayo Manchester United – Garsoore Sports
Tababaraha Bayern Oo…
Tababaraha Bayern Oo Ka Hadlay Xaaladda Xiddigiisa Lala Xiriirinayo Manchester United
Tababaraha cusub ee Allianz Arena ayaa shaaca ka qaaday in ciyaaryahankan khadka dhexe uu ku jiro qorshihiisa xilli ciyaareedka soo socda iyadoo la saxaafadda la isla dhexmarayo sheekooyin ku saabsan mustaqbalkiisa
Tababaraha kooxda Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa “ku kalsoon” in Leon Goretzka uu qandaraaska u kordhin doono kooxda xilli ay jiraan warar la xiriirinaya kooxda Manchester United.
Goretzka ayaa galay 12-kii bilood ee ugu dambeeyay heshiiskiisa haatan ee Allianz Arena waxaana lasoo jeediyay in Bayern ay lacag kaash ah ku heli karto xiddiga qadka dhexe xagaagan si looga fogaado inay si xor ah ku isaga lumiso 2022-ka.
Old Trafford ayaa loo maleeynayaa inay tahay meesha ugu dhow ee uu 26-jirkan tegi doono iyadoo United lagu soo waramayo inay diyaar u tahay inay soo gudbiso dalab rasmi ah, laakiin Nagelsmann ayaa ku rajo weyn in xiddigiisa uu doorto inuu la sii joogo kooxda heysata horyaalka Jarmalka.
Muxuu yiri Nagelsmann?
Goretzka ayaa ku soo laabtay kooxda Bayern kaddib fasaxii ka dambeeyay markii uu xulkiisa Jarmalka ku metalay Euro 2020 oo si niyad jab leh looga ciribtiray waxaana uu saftay kulankii saaxiibtinimo oo ay guuldarro 3-0 ah kala kulmeen Napoli sabtidii.
Markii la weydiiyay warbixin ku saabsan xaaladda qandaraaska Goretzka cayaarta kaddib, Tababare Nagelsmann wuxuu u sheegay suxufiyiinta: “Ku lug lahaan maayo inaan maalin walba wax ka idhaahdo.”
“Dabcan waxaan kala hadlay qorshayaasheyda ku aaddan isaga, waxaan u sheegay inaan ku farxi lahaa haddii uu kordhiyo aniguna sidoo kale waan ku kalsoonahay.”
“Waxaan sii wadi doonaa inaan diiradda saaro dhinaca isboortiga ee wax walba oo aan tuso inuu kamid noqon karo qadka dhexe ee ugu halista badan Yurub, wuxuu leeyahay awood uu kusii fiicnaado”.